မင်းအဖမ်းခံရပြီးနောက် - ချုပ်နှောင်ထား | Law & More B.V. | Eindhoven နှင့်အမ်စတာဒမ်
ဘ‌‌လော့ခ် » သင်၏ဖမ်းဆီးပြီးနောက်: ချုပ်နှောင်ထား
သင်သည်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သည်ဟုသံသယဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရပါသလား။ ထိုအခါရဲကများသောအားဖြင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုအခြေအနေနှင့်သံသယရှိသူအနေဖြင့်သင်၏အခန်းကဏ္whatကိုစုံစမ်းရန်ရဲစခန်းသို့သင့်အားများသောအားဖြင့်လွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်။ ဒီရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိဖို့ရဲကသင့်ကို ၉ နာရီကြာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ညသန်းခေါင်နှင့်ကိုးနာရီအကြားအချိန်ကိုမရေတွက်ပါ။ ဤအချိန်အတောအတွင်းသင်သည်အမှုမစစ်ဆေးမီချုပ်နှောင်မှု၏ပထမအဆင့်၌ရှိနေသည်။
ကိုးနာရီမလုံလောက်နိုင်သော်လည်းရဲကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အချိန်ပိုလိုအပ်သည်။ အစိုးရရှေ့နေသည်သင် (သံသယရှိသူအနေဖြင့်) အား ထပ်မံ၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်ရဲစခန်းတွင်ကြာရှည်စွာနေသင့်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါသလား။ ထိုအခါအစိုးရရှေ့နေအာမခံအမိန့်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်၊ အာမခံအမိန့်ကိုအစိုးရရှေ့နေမှထုတ်ပြန်ရုံသက်သက်သာမကရ။ အကြောင်းမှာအခြေအနေအတော်များများကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်ပါအခြေအနေများရှိသင့်သည်။
ရဲကသင့်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကိုတားဆီးလိုသည်။
ထို့အပြင်၊ တရားမ ၀ င်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုထားသည့်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သည်ဟုသင်သံသယရှိလျှင်မှသာရမ်းထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ၊ လေးနှစ်သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခြင်းခံရနိုင်သောရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်မှုများတွင်တရားခွင်မတိုင်မီထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ တရားမစွဲမီထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခွင့်ပြုထားသည့်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာဥပမာတစ်ခုမှာခိုးမှု၊ လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ အာမခံအမိန့်ကိုအစိုးရရှေ့နေမှထုတ်ပေးပါက၊ ရဲကသင့်အားသံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသောရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်မှုအပါအ ၀ င်၊ ဤညွန်ကြားချက်ကိုရဲဌာနတွင်ညသုံးနာရီများအပါအ ၀ င်ရဲအားထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဤသုံးရက်တာကာလကိုအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်နောက်ထပ်သုံးရက်ထပ်မံတိုးနိုင်သည်။ ဒီတိုးချဲ့မှု၏ဆက်စပ်၌, စုံစမ်းစစ်ဆေးအကျိုးစီးပွားသံသယအဖြစ်သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ချိန်တွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွင်ပါ ၀ င်သည့်အကျိုးစီးပွားတွင်ဥပမာအားဖြင့်လေယာဉ်ပျံသန်းမှုအန္တရာယ်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအားနှောင့်ယှက်ခြင်းမှနောက်ထပ်မေးမြန်းခြင်းသို့မဟုတ်တားဆီးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ဝင်စားမှုတွင်ဥပမာအားဖြင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ကလေးအတွက်စောင့်ရှောက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်ထိန်းသိမ်းရေးသို့မဟုတ်အသုဘသို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်စသည့်အခြေအနေများပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်အာမခံသည် (၆) ရက်အထိကြာနိုင်သည်။
သင်ကချုပ်နှောင်ထားသို့မဟုတ်၎င်း၏တိုးချဲ့ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သို့မဟုတ်အယူခံဝင်လို့မရပါဘူး။ သို့သော်သံသယရှိသူအနေဖြင့်သင်သည်တရားသူကြီးရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခံရပြီးဖမ်းဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ချုပ်နှောင်ခြင်း၌မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ စစ်ဆေးရေးတရားသူကြီးထံတိုင်ကြားနိုင်သည်။ ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာရှေ့နေနှင့်တိုင်ပင်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ပြီးနောက်၊ အကယ်၍ သင်သည်ချုပ်နှောင်ထားလျှင်ရှေ့နေတစ် ဦး ၏အကူအညီကိုရနိုင်သည်။ အဲဒါကိုသင်သဘောကျသလား ထိုအခါသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေကိုအသုံးပြုချင်ကြောင်းညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်ရဲကသူသို့မဟုတ်သူမထံချဉ်းကပ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ကတာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာရှေ့နေထံမှအကူအညီကိုရလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သင်၏ရှေ့နေသည်ဖမ်းဆီးခြင်းသို့မဟုတ်အာမခံအောက်တွင်မမှန်မကန်မှုများရှိမရှိနှင့်သင်၏အခြေအနေတွင်ယာယီထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ရှေ့နေသည်တရားခွင်မကျမီထိန်းသိမ်းထားစဉ်အတွင်းသင်၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုထောက်ပြနိုင်သည်။ ပြီးနောက်၊ တရားခွင်မ ၀ င်မီချုပ်နှောင်မှု၏ပထမနှင့်ဒုတိယအဆင့်များ၌သင့်အားကြားနာလိမ့်မည်။ ရဲများအနေဖြင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများစွာဖြင့်စတင်လေ့ရှိသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ရဲကသင့်အားတယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့်သင်၏လူမှုမီဒီယာကိုတောင်းခံနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှဤ“ လူမှုရေး” မေးခွန်းများအတွက်သင်ဖြေဆိုသည့်အဖြေများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင်သင့်အားအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့နောက်ရဲကသင့်အားသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သည်ဟုသူတို့ယူဆသောရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်မှုများကိုမေးမြန်းလိမ့်မည်။ သံသယရှိသူအနေဖြင့်သင်သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေရန်အခွင့်အရေးရှိပြီးသင်လည်းထိုအရာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုသင်သိရန်အရေးကြီးသည်။ အာမခံပေါ်လစီအတွင်းရဲအနေဖြင့်သင့်အားမည်သည့်အထောက်အထားများကိုသင်မသိရှိရသေးသောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာနေရန်အခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်နိုင်သည်။ ဤ“ စီးပွားရေး” မေးခွန်းများမတိုင်မီရဲကသင့်အားမေးခွန်းများကိုဖြေရန်မလိုကြောင်းသင့်အားအကြောင်းကြားရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်ထိုသို့အမြဲတမ်းဖြစ်လေ့မရှိပါ။ ထို့အပြင်ရှေ့နေသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေရန်အခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကျိုးဆက်များကိုသင့်အားအသိပေးနိုင်သည်။ တိတ်ဆိတ်စွာနေရန်အခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်မကင်းပါ။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်တွင်လည်းရှာဖွေနိုင်သည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စများတွင်တိတ်ဆိတ်စွာနေပိုင်ခွင့်.
(တိုးချဲ့) ချုပ်နှောင်ထား၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးလျှင်, အောက်ပါရွေးချယ်စရာများရရှိနိုင်ပါသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့အစိုးရရှေ့နေကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက်မင်းကိုဖမ်းဆီးဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ခံစားရနိုင်တယ်။ ဒီကိစ္စမှာအစိုးရရှေ့နေကမင်းကိုလွှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အစိုးရရှေ့နေအနေဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည်ယခုအချိန်ထိတိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးဖြစ်ရပ်များ၏နောက်ဆက်တွဲလမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အစိုးရရှေ့နေကမင်းကိုပိုပြီးကြာကြာဖမ်းဆီးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုတရားသူကြီးရှေ့ခေါ်သွားမှာပါ။ ထို့နောက်တရားသူကြီးကသင်၏ထိန်းသိမ်းမှုကိုတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ တရားခံကိုသင်သံသယရှိသူအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသင့်မသင့်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ သို့ဆိုလျှင်သင်သည်နောက်ထပ်တရားခွင်မတိုင်မီချုပ်နှောင်မှု၏နောက်တစ်ဆင့်လည်းဖြစ်သည်။
At Law & Moreဖမ်းဆီးခြင်းနှင့်ချုပ်နှောင်ခြင်းတို့သည်အဓိကဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အတွက်ကြီးမားသောအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းရှိအဆင့်များနှင့်သင်ချုပ်နှောင်ထားသည့်ကာလအတွင်း၌သင်ရရှိခဲ့သောအခွင့်အရေးများနှင့်ပတ်သက်သည့်အဖြစ်အပျက်များကိုကောင်းစွာသိရှိထားရန်အရေးကြီးသည်။ Law & More ရှေ့နေများသည်ရာဇ ၀ တ်မှုဥပဒေနယ်ပယ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပြီး၊ ချုပ်နှောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားမေးခွန်းများရှိပါကရှေ့နေများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ Law & More.
ယခင် Post မှ ကောင်းသောထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့် (GMP)
Next Post အင်တာနက်လိမ်လည်မှု